Lahatsary Vaovao Mampiseho Ireo Mpihady Diamondra Nampijaliana Tamin’ny Antsibe Tany Angolà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jolay 2016 10:05 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Nederlands, Español, Ελληνικά, عربي, 繁體中文, 简体中文, English
Pikantsarinà lahatsary mampiseho ireo mpiambina mampiasa antsibe hidarohana ireo lehilahy.
Nipoitra tao amin'ny YouTube ny lahatsary vaovao mampiseho mpihady diamondra folo nampijalian'ireo mpiambina mirongo antsibe, any Angolà.
Araka ny vohikalam-baovao tsy miankina, Maka Angola, izay natsangan'ny mpanao gazety mpiaro zon'olombelona Rafael Marques, noraketina ny Aprily 2016 ilay lahatsary. Mampiseho herisetra “feno haratsiana” sy “tia mampijaly” atao amin'ireo lehilahy tsy mitondra fitaovam-piadiana, izay mipetraka eo amin'ny tany, ilay lahatsary naharitra fito minitra sy 14 segondra.
Nitatitra ny Maka Angola fa “fantatra ho ireo mpiambina miasa aminà orinasa tsy miankina mitrandraka diamondra ambanin'ny tany any amin'ny faritr'i Lunda-Norte,” faritany avaratr'i Angolà, ireo mpamono.
Malaza amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny indostrian'ny fitrandrahana diamondra ambanin'ny tany any Angolà. Nandritra ny ady an-tranon'ny firenena naharitra 27 taona, izay nifarana ny taona 2002, samy niady tsy isy indrafo ny hitondra ny firenena daholo ireo antoko rehetra, taorian'ny nahazoany ny fahaleovantena tamin'ny Portiogaly ny taona 1975. Nisy ireo tatitra nilaza fa ny antoko iray, UNITA, naka sy nibodo ny fitantanana ireo lavaka diamondra ary nanomboka nivarotra ireo vato lafo vidy mba hamatsiana vola ireo zavatra ataony amin'ny ady. Izany no nahatonga ilay fiteny hoe diamondran'ny fifandirana na “mihoson-drà”, izay araka ny Firenena Mikambana entiny milaza ireo diamondra nampiasaina hamatsiana vola ireo hetsika maramila tamin'ny fanoherana ny governemanta neken'ny iraisampirenena.
Mpanao gazety Angole i Marques, izay nandany ny ampahany betsaka tamin'ny fiainany tamin'ny fiarovana ny zon'olombelona tao amin'ny firenena. Nahazoany loka iraisampirenena maro izany ezaka nataony izany, fa nahatonga azy nisy olana teo amin'ireo manampahefana tao Angolà, firenena nihaviany ihany koa.
Ny May 2015, nahazo sazy mihantona an-tranomaizina enim-bolana izy, noho izy nolazaina ho nanala baràka vondrona jeneraly Angoley notanisainy tao amin'ny bokiny “Diamondra mihosin-drà: Fampijaliana sy Kolikoly ao Angolà“.
“Efa aty amin'ny taona 2016 isika izao fa mbola misy ihany ireo mpihady no ampijaliana amin'ny antsibe,” hoy i Marques taminà tafatafa vao haingana niaraka tamin'ny Deutsche Welle, fandaharana iraisampirenenan'ny Alemàna. Maro amin'ireo zavadoza ireo no ataon'ireo mpiady teo aloha izay miasa ho toy ny mpiambina manokana amin'izao, fa tsy lasa lohatenim-baovao matetika ireo zavatra ataony ireo. Araka an'i Marques, tsy manao izay fara-heriny mba hanajanonana izany ireo manampahefana .
Ao amin'ny Facebook, mitovy hevitra amin'izany ny mpampiasa iray. Nanoratra izao izy naneho hevitra tao amin'ny Maka Angola:
Tsy ireo mpiambina ireo no tena mpampijaly, fa ireo mitondra an'i Angolà.
Ny taona 2015, nanao hetsi-panoherana noho ny tsy nahazoany karama ny vondronà mpihady iray. Voatatitra fa novonoin‘ny mpiandraikitra iray avy amin'ilay orinasa fiambenana tao aminà toby iray fihadiana diamondra ny iray tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Tsy voasazy ilay mpiandraikitra hatreto.
Ny volana Desambra 2014, nitatitra lahatsary nampiseho tranga mitovy amin'izany ny Global Voices, izay nahitàna mpiasanà orinasa fiambenana tsy miankina nampiasa antsibe mba handratràna ireo mpihady diamondra. Navoakan'i Marques voalohany tao amin'ny Maka Angola ity lahatsary ity.